စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနခြောက်သွေ့စက်များအတွက် pulverized ကျောက်မီးသွေး burner ချွေတာ China Manufacturer
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသိမ်းဆည်း Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner,ခြောက်သွေ့စက်များအတွက် Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner,Drier များအတွက် Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသိမ်းဆည်း Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner,ခြောက်သွေ့စက်များအတွက် Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner,Drier များအတွက် Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner
Home > ထုတ်ကုန်များ > Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner > စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနခြောက်သွေ့စက်များအတွက် pulverized ကျောက်မီးသွေး burner ချွေတာ
 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနခြောက်သွေ့စက်များအတွက် pulverized ကျောက်မီးသွေး burner ချွေတာ
2. အဆိုပါ pulverized ကျောက်မီးသွေး burner အတွက်ပြာ၏ပုံသေကာဗွန်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. 0.1%, အခြေခံအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမကာဗွန်အမှုန့်ပါပဲ။
1530% pulverized ကျောက်မီးသွေး burner ၏ 3. စွမ်းအင်သစ်ချွေတာမှုနှုန်း;
4. သည် burner အတွက် flue ဓာတ်ငွေ့အကြောင်းအရာမျှမ flue ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး၏အခြေအနေအောက်မှာအောက်ပိုင်း flue ဖို့အတွက်ပြောင်းလဲနေသည်။ ကျောက်မီးသွေးအပြည့်အဝကိုမီးရှို့လျှင်, အမျိုးသားရေးစံနှုန်းအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။
1. လောင်ကျွမ်းခြင်းထိရောက်မှုမြင့်မားသည်ဒါ pulverized ကျောက်မီးသွေး burners တွေက၏မြင့်အပူချိန်ဧရိယာ၌ pulverized ကျောက်မီးသွေး၏နေအိမ်သို့အချိန်ရှည်လျားသည်။ Flue ဓာတ်ငွေ့တိုက်ရိုက်အနက်ရောင်မီးခိုးများနှင့်ရေနွေးငွေ့အဖြူရောင်မီးခိုးမပါဘဲဆေးရုံကဆင်းသည်။
2. အဆိုပါကျောက်မီးသွေး burner အပူသည်အခါအပူချိန်မြင့်တက်လာအချိန်ကိုတိုစေ၏, အပူထိရောက်မှုမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ကျောက်မီးသွေးရဲ့အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်အနိမ့်ဖြစ်ပါသည်, ကျောက်မီးသွေးမျိုးစိတ်ကျယ်ပြန့်အသုံးချနှင့်စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်မြင့်မားတဲ့ဖြစ်ကြ၏။
pulverized ကျောက်မီးသွေးများ၏စက်နှိုးကျောက်မီးသွေး burner လွယ်ကူသည် 3. , အပူတက်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ထိရောက်မှုကိုအလွန်တိုးတက်ဖြစ်ပါတယ်။
4. သည် burner ၏လေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးနှင့်လောင်စာ input ကိုလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်, ထိုသို့အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကျယ်ပြန့်အတွက်မီးဖိုအပူချိန်နှင့်မီးလျှံအရှည်ထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။
5. ယင်း pulverized ကျောက်မီးသွေး burner ၏ပြည်တွင်းရေးအပူချိန်လယ်ကွင်းယူနီဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအပူကိုယျခန်ဓာ၏အပူမျက်နှာပြင်ကြီးမားသည်ကို၎င်း, slag အဆိုပါ workpiece ရဲ့မျက်နှာပြင်မှကပ်မထားဘူး, နှင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကောင်းလှ၏။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသိမ်းဆည်း Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner , ခြောက်သွေ့စက်များအတွက် Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner , Drier များအတွက် Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner , ဘွိုင်လာ Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner , စက်မှုဝန်ကြီးဌာန Bag ဖုန်ကောက်ခံရေး Cement , အမတ် Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner , Drier သည် Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner , စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအိပ်ဇောဓာတ်ငွေ့သန့်